‘म चिन्दिँन तर प्रेम प्रस्तावले हैरान छुः सुनिता दुलाल – YesKathmandu.com
काठमाडौं, । गायिका सुनीता दुलाल विशेष गरी तीजको समयमा बढि चर्चामा आउने गर्दछिन् । अन्य गितभन्दा उनका तीज गितले निकै चर्चा पाउने भएपछि उनको पनि चर्चा चुलिन्छ । अन्य कलाकार जस्तै उनी पनि बेला बेलामा चर्चा आउने गर्दछिन् । दुई बर्षअघि विवाह गर्ने घोषणा गरेकी सुनीताले अहिले आफु सिंगल भएको बताउन थालेकी छिन् ।
उनले आफु सिंगल भएको बताएपछि उनको प्रेम सम्बन्धमा ब्रेक भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तरपनि प्रेमी को थिए ? न त उनले कहिले भनिन् नत उनको विवाह नै भयो । उनले चर्चाका लागि भनेकी हुन् या साँच्किै प्रेम सम्बन्ध टुटेको हो उनी कहिले बताउन चाहँदिनन् ।
सामाजिक सञ्जालमा निकै लोकप्रिय सुनीताका फेसबुकमा ८ लाख फ्लोस् छन् । उनी आफ्ना धेरै कुरा त्यही फेसबुकबाट सार्वजनिक गर्ने गर्दछिन् । तर प्रेम सम्बन्धका बिषयमा अन्य कलाकार जसरी उनले कहिलेपनि आफ्नो ब्वायफ्रेण्डलाई सार्वजनिक गरिनन् । तर भन्छिन् ‘फेसबुकमा प्रेम प्रस्ताव राखेर हैरान पार्दछन ।’
Good point, कालाकारज्युले सधै Public र Media लाई झुक्याउनु हुन्छ । Boyfriend त भए पो त गायिकाको, अरुको प्रेमि र बुढो संग बिदेशमा सल्किन पाएपछि के को बिहे । त्यसैले त बर्षमा मुस्किलले एउटा गित निकालेर पनि बाह्रै महिना बिदेशको भ्रमण गर्छिन । Boyfriend बनाए वा बिहे गरेपछि त श्रीमानले कहां afford गर्न सक्लान र गायिकाको Demand र Diamond 😉
Intuitive Tarot Classes says:
gym motivational quotes says:
I simply want to say I’m beginner to blogs and honestly enjoyed your website. Likely I’m planning to bookmark your blog . You surely come with outstanding articles and reviews. Many thanks for revealing your webpage.